Abakhangisi Bazolisebenzisa Kanjani Iqiniso Lokungathandeki? | Martech Zone
NgoMgqibelo, July 12, 2014 NgeSonto, uJanuwari 14, 2018 Douglas Karr
Ukucabanga ukuthi eminyakeni eyishumi ezayo, izimoto namadivayisi eselula azofakwa ngokuphelele kuwo Ukungathandwa kwabathelisi esikubona kuyathakazelisa. Ngisebenzisa ukuzulazula ukuze ngifinyelele yonke indawo emotweni yami futhi angikwazi ukulinda kuze kube yilapho okubukwayo kusuka esikrinini esincane esikwiselula yami noma esikrinini sokuzulazula emotweni yami… kuya embondeni kufasitela lami langaphambili eligcina ukugxila kwami ​​ekushayeleni kunokubheka emuva njalonjalo. Ukuvela kwamakheli nolunye ulwazi olubucayi kupholile kakhulu ukuthi ungacabanga ngakho.
Ngokuqondene nokumaketha, anginasiqiniseko sokuthi kuzoba yimakethe enkulu njengoba abaningi bekholelwa. Ngicabanga iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona njengolwazi oluningi lomsebenzisi necebo lokuzibandakanya, hhayi ithuluzi lokukhangisa lokukhangisa. Isibonelo, kungahle kube kuhle ukusuka kuncazelo yomkhiqizo esizeni noma ekhasini ukuze ukwazi ukubona lapho umkhiqizo utholakala khona eduze. Noma ukusuka kulwazi uye ekuhlanganyeleni okusebenzisana. Njengoba kungubuchwepheshe obusha, obupholile, izinkampani eziyifaka namuhla zibona imiphumela emangazayo. Njengoba iba yinto ejwayelekile, anginasiqiniseko sokuthi lokho kuzohlala isikhathi eside. Ngingahle ngibe nephutha, noma kunjalo.
Enye inzuzo yale mikhankaso manje ukuthi kufanele ubhalisele uhlelo lokusebenza ukubuka ukuthuthuka. Lokho kusho ukuthi bayazi ukuthi ukuphi nokuthi ungubani uma ubheka umkhankaso we-AR. Landa I-Aurasma on wakho iOS or Android device bese ukhomba isithombe esingezansi ngohlelo lwabo lokusebenza.
Tags: ukumakethaUkungathandwa kwabathelisi esikubonai-aurasmaizimotoblipparingilazi kaGoogleingenovegaIzitudiyo ze-kallocovamileukumaketha armetaioilensi yedolobha lenokiaqualcomm vuforiaucingoukucwiliswa ngokuphelelevuzixwikitudezappar